Parvis Analakely : hampivondronana ireo mpandraharaha ny “Salon Ny Vinako” | NewsMada
Parvis Analakely : hampivondronana ireo mpandraharaha ny “Salon Ny Vinako”
Tanterahina mandritra ny roa andro ilay hetsika “Salon Ny Vinako”, eny amin’ny tokotany malalaky ny Parvis Analakely. Manomboka anio asabotsy 13 jolay izany hatramin’ny rahampitso alahady. Marihina fa nisy fihemorana kely ny hetsika noho fisian’ny lalao nataon’ny ekipam-pirenenana malagasy, tamin’ny lalao “Can” ny alakamisy alina lasa teo, na tokony ho nanomboka ny andron’ny omaly zoma aza izany.
Tanjona amin’izao hetsika izao ny hivondronan’ireo matihanina amin’ny sehatra maro hanatanterahana ny vinavinan’ny olona tsirairay eo amin’ny fiainana andavanandro, raha ny fanazavana voaray avy amin’ny mpikarakara, ny Joyce Group, sy ny sekoly ambony tsy miankina iray eto an-dRenivohitra. Fantatra fa handray anjara amin’ity hetsika mandritra ny roa andro ity ny tranoheva manodidina ny 80 eo ho eo izay mivelatra amin’ny lafin-javatra maro tadiavin’ny filan’ny mpanjifa, toy ny sekoly ambony, ny orinasa tsy miankina, ny mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny varotra, ny mpikarakara lanonana, sy ny maro hafa. Raha ny fanazavana voaray hatrany, hifameno ny mpitsidika sy ny mpandraharaha mandritra io “Salon Ny Vinako” io mba samy hahatanteraka ny vinany ny tsirairay.
“Tsara homarihina ihany koa fa andiany voalohany amin’ny hetsika karakarain’ny Joyce Group ity hita etsy amin’ny Parvis Analakely ity ka hoezahina hatao matetika izany”, hoy ny filoha tale jeneraliny, i Manantena Miandrisoa. Nambarany fa ankoatra ny varotra fampirantiana, hisy ihany koa karazan-dalao fialamboly maro efa nomanina sy seho iarahana amin’ireo mpanakanto vao misondrotra tarihin’i Alson ary ny fisarihana tombola hahazoana loka goavana maro. Marihina fa hisy fampiofanana hiresahana lafin-javatra maro mandritra ireo roa andro ireo. Inoana fa samy hahazo ny tandrifiny tsirairay hamonjy ity fotoana ity.